Maitiro ekuvandudza script kana rundown kuti ikubatsire kunyora yako novel | Zvazvino Zvinyorwa
Maitiro ekunyorera inoverengeka: kugadzira iyo script kana rundown
Patakatanga nyora bhuku, hatitangi kubva pakutanga. Sezvo diki sezvazviri, isu tine zano yezviitiko zvichaitika, zvevatambi vachatora chikamu mazviri uye zvevamwe vanhu zviitiko zvatakambofungidzira.
Kune mazhinji izvo zvakakwana kuti vatarise iro risina chinhu peji uye vatange kunyora, asi mazhinji emanyowani pane nhoroondo yekugadzira inokurudzira iyo kujekeserwa kwescript kana rundown iyo inotibvumidza isu kuronga zvakanyanya kana zvishoma izvo zvatinozotaurira uye izvo zvichawedzera, sezvatichaona, zvimwe zvinhu zveinovelin senge verisimilitude yayo uye zvinokonzeresa.
Mune ino post isu tichapa mamwe mazano nezvekuti ungagadzira sei rundown yakadaro uye isu tichakurukura zvimwe zvezvakanaka zvacho.
Sezvatakambotaura pakutanga, hutachiona huchave iwo pfungwa yekutanga yatinayo, iyo inogona kungoerekana yaitika kana kunge yatitenderedza misoro yedu kwenguva yakareba, asi chokwadi zvirokwazvo tinoda kuiwedzera kuti tigadzire ruzhowa. Maitiro akanaka eichi kufunga. Izvo ndezvekutora bepa nepeni uye kunyora pasi zvese zvinoitika kwatiri, chokwadi, zviitiko zvichaitika, zvinokonzera uye mhedzisiro yechiitiko chimwe nechimwe, zvinokurudzira zvevatambi, nezvimwe.
Kana tangove nezvose izvo, isu tinokwanisa kutanga kugadzira iyo script iyo ichave iine ruzivo mukunyora zvinoitika muchikamu chimwe nechimwe, chitsauko kana chiitiko (zvinoenderana nekuchenjerera kwatinoita) kuti tive negwara rinotibvumidza kuti titarise pachikamu chakarongeka kana tichinyora pachinzvimbo chekuramba tichinetseka nezvekugadzira zvirimo. Ruzivo rwe rundown rwoga rwuri kune kuravira kwemunhu wese, asi sekutonga kwakawanda, ruzivo rwakawanda rwarwuinarwo, zvirinani, kubvira ipapo tichava takasununguka kushandisa iwo mazano kana kuarasa. Izvo hazvisunge isu, asi zvinogona kutibatsira munguva dzekuvhara.
Ehe saizvozvo, kudzikira hakusi kutsvene, kureva kuti, havasi vese vanyori vanoishandisa, uye kwete zvese zvirimo zvinofanirwa kuoneka nenzira yekumanikidza mune yekupedzisira vhezheni yebasa: zvinhu zvinogona kuchinjwa, kuwedzerwa kana kubviswa apo isu tichifambira mberi mukunyora kwenyaya.
Saka, iyo chikuru chakanakira kushanda nescript kana rundown ndiyo inotevera:
Iyo inotibvumidza isu kutarisa pane zvakarongeka chikamu cheinovhuru panguva yekunyora kwayo, nekudaro chimiro chemitauro chinosimbiswa.
Ndicho shamwari yakanaka kurwisa blockades.
Iyo inotibvumidza isu kuti tisakanganwa chero zano uye nekusunungura pfungwa kubva pakuyeuka zvese zvayakatofunga kuti zviitike, pfungwa nyowani dzinogona kubuda.
Ichokwadi chekuve icho skeleton yenoveli, usati wanyora, inotibvumidza isu nekukurumidza uye nemaziso kukoshesa zvimwe zvakakosha zveiyo zvakadai semakakatanwa. Nenzira iyi zviri nyore kupfumisa iwo mapoinzi patinogona kutadza. Izvo zvinogara zvichidhura pane kudzvinyirira zvimwe zvinhu zveinovhuru nezvayo zvakanyorwa kare.
Chekupedzisira, zvinogona kubatsira kwatiri marongero atinopa iwo chokwadi. Pakuvaona vakatorwa nenzira yakapfupika Zvinogona kuve nyore kwatiri kufungidzira dzakasiyana mharidzo dzadzo kana imwe mhando yeodhi inofarira kukakavara kana kunyengera..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Maitiro ekunyorera inoverengeka: kugadzira iyo script kana rundown
Beta kunze uko akadaro
Yakanaka uye inobatsira chinyorwa. Pasina kupokana, iyo rundown chishandiso chakanakisa icho chinofanirwa kugara chichifungidzirwa mune chero nyaya, zvinobatsira zvakanyanya.
Pindura kune beta kunze uko
Judith Kerr, munyori we Apo Hitler Akabira Pink Rabbit, anofa
Ularsula Iguarán: mufananidzo wevakadzi veLatin America kuMacondo